India: Ireo fipoahana baomba erak’i Bangalore · Global Voices teny Malagasy
Nivoaka ny 26 Jolay 2008 6:00 GMT
Bangalore, renivohitry ny fanjakana ao Karnataka, dia lasibatry ny fampihorohoroana tamin’ny alàlan’ny baomba ora vitsy lasa izay. Ny vaovao ampela-tànana dia manambara fipoahana baomba fito tamin’ny faritra samihafa tao an-toerana, tanatin’ny elanelam-potoana roambinifolo minitra. Tsy dia nahery vaika loatra ireo baomba ary irony karazana zelatina (gélatine en baton) irony no nampiasaina.. Ho fisorohana ny resaka gaigy dia tapaka ny fifandraisan-davitra tao an-tanàna ary notapahana koa ny làlana. Hoy i Sachin Uppal
I Vikas Sharma dia miteny ny amin’ny faharisarisan’ny fiantohana ny fandriam-pahalemana ao amin’ny tanana.
I Hari Shenoy dia manoratra mikasika ny fomba iainan’ireo olona ny ahiahiny ao am-piasany.
Tsy vitsy ny olona nanoratra twittering momba ireo fipoahana. Jace niteny hoe: «… na dia aty amin’ny antsasaka kilometatra miala amin’ny fipoahana akaiky indrindra aza izahay. Nisento tokana ny olona fa tsy voadona ny fahafahan’izy ireo mampiasa ny Aterineto. “.